Kedu ka m ga - esi nweta ego iji wepụta usoro SEO?
A na-ahụkarị maka ọtụtụ ụlọ ọrụ dijitalụ dịpụrụ adịpụ mgbe onye ahịa jụrụ mgbe ahụ maka ọrụ SEO, ha kwenyekwara inye aka, enweghị ahụmume zuru oke na mpaghara a na ọbụna ndị ọrụ ọrụ ọkachamara. Anyị nwere ike ịghọta mkpebi ha n'ihi na ha anaghị achọ ka onye ahịa kwụsị. N'ime ọnwa ole na ole, ha na-agbasi mbọ ike inweta okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ ma melite ọkwa ya. Otú ọ dị, ha enweghị ike inweta ezigbo nsonaazụ ha nwere ntakịrị nka na mpaghara a. Ọ bụrụ na ịchọọ ịhapụ oge ịmụta SEO, enwere ụzọ. Ị nwere ike ịchọta ezigbo reseller SEO.
N'ikwu okwu n'ozuzu, onye na-ere SEO bụ onye ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-enye ọrụ dị iche iche nke SEO na ọnụahịa ọnụ. Onye nyochaa njirimara search engine ga-enyere gị aka ịchọta mgbasa ozi kachasị mma nke ndị ahịa gị. SEO reseller na-enye gị oge kariri nke i nwere ike itinye aka na isi gị ma nye ndị ahịa gị ihe kacha mma.
N'isiokwu a, ị ga-achọta ozi bara uru ka esi achọta onye ziri ezi na-akwụ ụgwọ na otu esi erite uru na ọrụ ya.
Gịnị mere i ji chọọ iji usoro reseller SEO?
Nke mbụ, ezigbo reseller SEO nwere ike inye gị ike nkà ahịa.Dịka ọrụ gị anaghị ere ọrụ njikarịcha, mana ịzụta echiche kachasị mma, ị ga-enwe ike ịza ajụjụ ndị ahịa gị banyere usoro nyochaa weebụsaịtị ha na SEO usoro ị na-eme iji nweta ihe dị mma. Nwee njikere inye ndị ahịa gị na akụkọ SEO kwa ọnwa na nkọwa nyocha.
Ọ bụrụ na usoro reseller SEO gụnyere nanị ọrụ SEO dị ọcha, ọ dịghị ihe ị ga - echegbu onwe gị.N'okwu a, ndị ahịa gị agaghị ama mgbe ọ bụla na ịmepụtawo akụkụ ụfọdụ kachasị mma. Ọ pụtara na ahụmahụ ndị ahịa na-adịghị mma na ụlọ ọrụ gị ga-echeghachiri gị, ọ bụghị na SEO reseller program. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kpachara anya ka ị na-ahọpụta onye reseller SEO.
Ikwesịrị ịmara atụmatụ SEO n'ozuzu na atụmatụ ndị na-etinye n'azụ ngwaahịa ndị na-ere ahịa gị.Ọ ga - enyere gị aka ịmị ụda na ndị ọkachamara. Ọzọkwa, ọ ga-enyere gị aka ịduzi ndị ahịa gị na atụmatụ ndị dị ha mkpa iji mee ka azụmahịa ha baa ọgaranya. Iji jide n'aka na ị maara nke ọma gbasara atụmatụ Ziri azụ SEO, ịkwesịrị ịhọrọ usoro reseller SEO nke na-enye gị ọzụzụ mgbe niile ma ghara ịhapụ onwe gị.
SEO bụ ihe dị oké ọnụ ahịa
Ugbu a, ọrụ SEO na-efu ọtụtụ. Onye nlekọta SEO dị elu na United States na-anata $ 150 kwa awa na ihe dabere na ọkwa ya. Ya mere ọ bụrụ na ị kpebie ịjụ SEO gị, ị ga-adị njikere kwụọ ụgwọ karịa 100 $ kwa elekere iji nweta nsonaazụ ọma. Ị nwere ike irite uru site na outsourcing SEO, n'ihi na ọ ga-enyere gị aka ịchekwa ego n'aka ndị ọkachamara ọkachamara na-adọta ndị ahịa nwere nchegbu Source .